I-Synology Mesh Router MR2200ac Isisombululo Esihle Sebhizinisi | TeraNews.net
I-Synology Mesh Router MR2200ac yisixazululo esihle sebhizinisi
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 10.03.2021
Imikhiqizo yomkhiqizo we-Synology ayidingi ukukhangisa. Kuyaziwa ngokuqinisekile ukuthi ngaphansi kwalolu phawu lomhlaba umhlaba ubone i-NAS ethembekile futhi ehlala njalo, esibhale ngayo phambilini. Kunzima ukubiza iSynology Mesh Router MR2200ac ngokuthi iyintsha. Kusukela yavela emakethe ngonyaka owedlule. Ngesikhathi sokukhishwa, umzila wawusolisa kakhulu. Kepha ngemuva konyaka, singasho ngokuphepha ukuthi lena ngenye yamadivayisi wenethiwekhi yesabelomali angcono kakhulu emabhizinisini amancane.
Yini i-Synology Mesh Router MR2200ac
Uma ungalwazi uhlelo lweMesh, khona-ke kungcono ukuqala izincazelo ngalobu buchwepheshe. Inethiwekhi ye-Mesh iyisistimu ye-modular (okungenani ama-routers amabili) akwazi ukuzimela ngokulinganayo umthwalo phakathi kwamadivayisi. Idivayisi eyodwa ixhunywe kwi-Inthanethi. Okunye, kusetshenziswa inethiwekhi engenantambo, vumelanisa, ulawula yonke inethiwekhi ye-Wi-Fi egumbini.
Eqinisweni, lesi yi-analogue ethuthukisiwe yoMphindayo. Kusistimu ye-Mesh kuphela, udinga ukumisa iyunithi lekhanda, futhi konke okunye kuzolungisa ngokuzenzakalela izilungiselelo. Kuma-repeaters, udinga ukumisa yonke into ngokuhlukile futhi akukho bhalansi yokulayisha ephezulu eziteshini ezingenantambo.
ISynology Mesh Router MR2200ac iyi-3-band router. Idivayisi ibhekiswe kubasebenzisi basekhaya futhi ibekwe esigabeni senani lesabelomali. Umkhiqizi uthi i-router eyodwa enjalo iyakwazi ukumboza indawo efinyelela kumamitha-skwele ayi-180 ngesiginali yekhwalithi ephezulu. ISynology Mesh Router MR2200ac ilungele abanikazi bezindlu ezizimele ezinemigangatho eminingi. Uma ufaka idivaysi eyodwa yenethiwekhi phansi ngayinye, ungakha inethiwekhi engenantambo ekahle.
Imininingwane ye-Synology Mesh Router MR2200ac
Inombolo yamabanga nesivinini esiphezulu 1 x 2.4GHz @ 400Mbps, 2 x 5GHz @ 867Mbps
Ukuxhaswa okuningi kwe-SSID Yebo
WAN Ngemvume 1 × 10/100/1000 Ethernet
Ukukhishwa kwe-LAN 1 × 10/100/1000 Ethernet
Ukutholakala kwe-USB Yebo, 1xUSB 3.0
Uhlobo lwe-Antenna Ngaphakathi
Ukusekelwa kwe-MU-MIMO / MIMO Yebo Yebo
I-FireWall (firewall) Zikhona
Ukusekelwa kwe-VPN Yebo
Iseva ye-DHCP Yebo
Isibonisi se-WEB Yebo (SRM)
Media Server Inkomba yemultimedia
PS3 / PS4 / Xbox 360 / Xbox One ukwesekwa
Izindlela zokubethela I-WPA3-Okomuntu siqu, i-WPA3-Okomuntu / Ibhizinisi, i-Wi-Fi Enhanced Open (OWE)
Outable mountable No
Izindleko $ 130-150 kudivayisi engu-1
Okuvelayo okujwayelekile kwe-Synology Mesh Router MR2200ac
Ingxenye ehamba phambili ukuthi i-router, efana I-NAS uhlobo oluhle lwe-Synology, oluzenzakalelayo ngokuphelele. Ukusetha kulula njengokufaka i-Synology Mesh Router MR2200ac yakho bese uyinika amandla. Ikhasi lokuqala lemiyalo liqukethe ikheli olidingayo ukushayela kulayini wesiphequluli ukuya kuphaneli yomlawuli. Uma uxhuma i-PC noma ilaptop ngekhebula kokufaka kwe-LAN, iwindi lokusetha lizoqala ngokuzenzekelayo. Futhi-ke, umsizi uyakhanya, okufinyeleleka kakhulu futhi okuqondakalayo kusiza ukusetha i-router.
Okuvelayo okuhle kuphela. Lokhu, kanye nezimpawu zesivinini esimenyezelwe, nokulungisa kahle inethiwekhi yebhizinisi elincane. Ngaso sonke isikhathi sokusetshenziswa, kwakukhona ukuphawula okukodwa kuphela - ukuze uhlelo lwe-Mesh lusebenze, udinga ukunakekela ubukhona bezinguqulo ezifanayo zohlelo lokusebenza lwe-SRM kuwo wonke amadivayisi. Lokhu kukhulunywa ngabathandi bokuvuselela. Ithuthukise idivayisi eyodwa - yenza okufanayo nayo yonke inqubo.
Iyiphi ikhompyutha oyidingayo ukumayini i-Chia Coin
Ungayikhetha kanjani i-ovini ekhishini
I-Router XIAOMI AX9000 WI-FI 6 - ukubuka konke
I-TV-BOX H96 MAX (ku-RK3566 chip) enesilawuli kude se-Bluetooth